ရှောက်သီးသုပ် - Yangon Thu Michelle Video % (Citrus Salad DIY)
Activities, Video Jun 15, 2018
ဒီအပတ်သောကြာနေ့မှာတော့ မိုးရာသီနဲ့ အင်မတန်လိုက်ဖက်တဲ့ ရှောက်သီးသုပ် ကို ပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းဆုံး အလွယ်ဆုံးသုပ်ပြထားတယ်။ မီရှဲသုပ်နေကြနည်းလေးပါ။ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာထက် ကြက်သွန်လှီး ဘာညာမလုပ်ချင်တဲ့မီရှဲအတွက်တော့ နတ်သုဒ္ဒါပါပဲ။ မိုးရွာနေတုန်း ကော်ဖီနဲ့ ရှောက်သီးသုပ် … ရှယ်ပဲနေမှာ … စမ်းသုပ်စားကြည့်နော် ..
– ရှောက်သီး အနေတော် တစ်လုံး (မကုန်လဲနောက်နေ့သုပ်စားဖို့သိမ်းထား)
(ဒါမှမဟုတ် သံပုရာသီးနဲ့သုပ်လဲရတယ်။ သေးတော့ ပိုလက်ဝင်တာပေါ့)
– ပဲမှုန့် အကျက်မှုန့်
– ငပိ (လွယ်အောင် ရယ်ဒီမိတ်ထည့်လည်းရတယ်။ မျှင်ငါးပိကို ကင်ထည့်လည်းရတယ်)
– ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့် / ငရုတ်သီး အစိမ်းတောင့် (စပ်ရင်ပြီးရော ကြိုက်တာထည့်)
– ပုစွန်ခြောက်မှုန့် (အချဉ်ဓာတ်ကိုထိန်းဖို့ အတွက် မပါမဖြစ်)
– မြေပဲဆီစိမ်း/ဆီကျက် (ဆီစိမ်းနံ့ကို ကြိုက်လို့ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ ဆီစိမ်းပဲထည့်ထားပါတယ်)
ဒီနည်းလမ်းကို မီရှဲရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းအေးမြမြကျော်အိမ်သွားတုုန်း သူ့အဘွားသုပ်ကျွေးခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။ ကြိုက်လို့ သွားတိုင်းပူဆာခဲ့တဲ့ ရှောက်သီးသုပ်ပေါ့။ ရှောက်သီးမရှိလဲ သံပရာသီးနဲ့သုပ်တယ်။ ပြီးတော့ အဘွားက ဂေါ်ရခါးဆိုတော့ ဂေါ်ရခါးစကားတစ်လုံးသင်ခဲ့သေးတယ် … “မွန်းပရိုချို” … အဓိပ္ပာယ်က “စားကောင်းတယ်” တဲ့ ….
Produced ByIDEA LIVE
In this video, I would like to share about how to make lemon salad in Myanmar traditional way. As I’malifestyle blogger, making disk is also part of it. Myanmar people love to salad everything, including citrus. You can use lime or lemon if you don’t have citrus but it may handy. Here’s the recipe Ingredients
2. peanuts powder
3. paste fish (ready made)
5. Dried prawn powder
6. peanut oil or sesame oil or cooked oil (with fried onion or garlic)
Prepare citrus as in Video and mix all ingredients as you like. This techniques is show by my friend’s grandmother. I always request to make it for me when I’ve been their home. Citrus salad is match with the raining season, because the weather is cold and sour and spicy make your moth watering.
Recipe of Yangon Thu Michelle